FONJAN’ANTANIMORA : Voatery nafindra efitrano mitokana i Claudine Razaimamonjy
Ny volana jona tamin’ ny taona 2017 no naiditra am-ponja vonjimaika teny amin’ny fonjan’ Antanimora ramatoa Razaimamonjy Claudine rehefa avy nandalo fitsarana. Fotoana vitsy taorian’io dia nalefa teny amin’ny fonjan’ny vehivavy any Manjakandriana ny tenany. 7 mars 2019
Naharitra roa taona mahery teo no nitazomana azy tany ary naverina nafindra ao amin’ny fonjan’ Antanimora indray vao tapa-bolana lasa izay. Tao amin’ny sokajy misy ireo vehivavy voafonja no nametrahana azy. Araka ny fantatra dia voatery natokana efitrano hafa mihitsy Razaimamonjy Claudine amin’izao fotoana izao. Anton’ny famindrana azy izao raha ny fanazavana voaray, noho izy mikasa hitarika ireo vehivavy voafonja miaraka aminy hanao fitokonana sy hikomy.
Manoloana io dia tsy maintsy nandray ny andraikiny ny teo anivon’ny fonja namindra azy ho amina efitrano hafa tsy ahafahany mifanerasera be loatra amin’ireo vehivavy voafonja miaraka aminy. Raha tsiahivina dia raharaha kolikoly no nanenjehana ity farany miampy ireo raharaha hafa nambaran’ny teo anivon’ny Bianco. Ankoatr’izay dia fantatra fa nangataka ny hamindrana ny toerana hamonjana azy i Eddy Maminirina.
Ity farany izay mpandrandraha nalaza tamin’ny fanondranana andramena an-tsokokoso, nosamborin’ny mpitandro filaminana tetsy Ivandry herinandro maromaro lasa izay. Afak’omaly no nohenoin’ ny Fitsarana ny tenany. Nangataka ny hahazo fahafahana vonjimaika izy tamin’izany saingy nolavin’ny Fitsarana, tsy fantatra kosa na hoeken’ny fitsarana na tsia izay famindran-toerana angatahiny izay.